ကာတွန်းစောငို – ငတုံးတို့ တိုင်းပြည် ဆိုသတဲ့ (Saw Ngo) | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်းစောငို – ငတုံးတို့ တိုင်းပြည် ဆိုသတဲ့ (Saw Ngo)
ကာတွန်းစောငို – ငတုံးတို့ တိုင်းပြည် ဆိုသတဲ့
မတ် ၈၊ ၂၀၁၄
2 Responses to ကာတွန်းစောငို – ငတုံးတို့ တိုင်းပြည် ဆိုသတဲ့ (Saw Ngo)
aye mg than on March 8, 2014 at 1:00 pm
ငတုံးတို့တိုင်းပြည် အကြံတုံး ဥာဏ်တုံး ပညာတုံး စည်းကမ်းတုံး ယဉ်ကျေးမှုတုံး စာနာမှုတုံး ညှာတာမှုတုံး လူမှုရေးတုံး မေတ္တာတုံး သစ္စာတုံး နောက်ဆုံးဘာသာရေးတုံး ဘုံးဘုံးလဲကျ လူလုံးမလှ လူ့အန္တ ဘယ်နေရာမှာ မှ သုံးမရ
ninety nine on March 9, 2014 at 5:38 am
dammy country. Burmese government is dam stupit I mean thein sein group. so call democratic bullshit. not the people.